सुर-ताल नै खुस्कँदै छ द भोइस् किड्सको, प्रविशाका प्रतियोगी देखिए कमजोर – Facebook Khabar
सुर-ताल नै खुस्कँदै छ द भोइस् किड्सको, प्रविशाका प्रतियोगी देखिए कमजोर
facebook - January 6, 2022
काठमाडौँ : द भोइसको फर्म्याटमा सबैभन्दा रोचक नै ब्लाइन्ड अडिसन हो। जति जति एपिसोडहरू अगाडि बढ्दै जान्छन् कार्यक्रम अल्छीलाग्दो हुँदै जान्छ। त्यसैले त ट्यालेन्ट र पपुलारिटीमा आइडललाई यसले अझै भ्याउन सकेको छैन।
धेरै पढिएको ‘ब्लाइन्ड डेट’ को निर्माण टिमले दर्शकलाई यसरी उल्लु बनायो ‘मेरो आँसु चुकाउन सक्छौँ’ भन्दै भिटेनले दरबारमार्गमा पैसा फालेर…. हिजो झुम्मिने फ्यानले आज चिन्दैनन् यी कलाकार
अहिले नेपालमा द भोइस किड्स सिजन चलिरहेको छ। यो टप १६ मा पुग्दा सहभागीको स्वर अझ माझिनुपर्ने अनि कार्यक्रम अझै रोचक हुनुपर्ने हो। तर के भयो कुन्नि कोच प्रमोद अनि कोच प्रविशाको टिममा भएका प्रतियोगी पनि सुर बाहिरै देखिए।
कोचले समय दिन नसक्दाको समस्या हो या सहभागी त्यो त खुलेको छैन। तर टप १६ मा जानका लागि चारै जना कोचको समूहमा रहेका केही अपवाद छाड्ने हो भने सहभागीले त्यति राम्रो कोचिङ पाएझैँ सुनिएन।
अधिकांश प्रतियोगीको सुर चिप्लिएको सुनियो। सहभागीको उमेर अनि स्वरको स्तर अनुसार गीत छनौटमा पनि कोचहरू चुकेको देखियो। यो यत्तिको पपुलर कार्यक्रमका लागि सुखद सङ्केत हैन।
विशेष गरी चार जना कोचमध्ये प्रविशा कमजोर देखिइन् गीत छनोट र कोचिङका लागि। सबै कोचसँग असिस्टेन्ट समेत हुन्छन् नै। तर प्रतियोगीमा प्रशिक्षणको सङ्केत देखिएन। सुर अनि ताल विनाको प्रस्तुतिले कार्यक्रम त्यति रोचक भएन। झ्यार झ्यार सुनियो।
अहिले बच्चाहरूको गायन सम्बन्धी अर्को रियालिटी शो पनि चलेको छ सारेगामापा लिटिल च्याम्प्स। त्यसका प्रतियोगी र द भोइसका प्रतियोगी हेर्ने हो भने सारेगामापाका प्रतियोगी बढी निखारिएको सुनिन्छ।
त्यसैले कार्यक्रमको स्तरसँगै सहभागीको प्रतिभा निखार्ने हो भने कोचहरूले समय दिनैपर्यो। नत्र यो झ्यार-झ्यार पाराले त फ्रेन्चाइज कार्यक्रमकै बेइज्जत पो हुन्छ त।
एक सातामै १६७ अंकले बढ्याे नेप्से, के बजार फर्किएकै हाे त ?
सेयर बजारमा रौनकता : कारोबार रकम भने घट्यो, तीन कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता